हनुमानहरुलाई टिकट बिक्री वितरण गरियो, निर्वाचनमा शर्मनाक पराजय भोगेपछि हामीलाई असहयोग गरेको आरोप लगाइयो « Nepal Bahas
हनुमानहरुलाई टिकट बिक्री वितरण गरियो, निर्वाचनमा शर्मनाक पराजय भोगेपछि हामीलाई असहयोग गरेको आरोप लगाइयो
यदि त्यसाे गरिएन भने कांग्रेस पार्टीलाई इतिहासको गर्तमा खोज्नु पर्ने निश्चित छ
प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०७६, बिहीबार २०:११
भोजराज अर्याल ,नेता एवं महासमिती सदस्य ,नेपाली कांग्रेस ,स्याङ्जा
नेपाली समाजले वि.स २००७ सालको जनक्रान्तिमार्फत खोजेको परिवर्तन आज पनि खोज्दै छ । स्वतन्त्रता,समानता र भातृत्वको खोजी आज पनि जारी छ । नेपालको प्रमुख लोकतन्त्रवादी पार्टी नेपाली कांग्रेसले नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि गाउँगाउँ र बस्तीबस्तीबाट राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको जागरण अभियान संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् -नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाका नेता एवं महासमिती सदस्य भोजराज अर्याल । वालिङ नगरपालिकाका पुर्व मेयरसमेत रहेका अर्याल लोकप्रिय र विकासप्रेमी नेताका रुपमा चिनिन्छन ।
नेपाल विद्यार्थी संघमार्फत आफ्नो राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका अर्याल यतिबेला चर्चाको शिखरमा छन् । पुर्व उपप्रधानमन्त्री एवं केन्द्रिय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठका बिरुद्ध केन्द्रिय अनुशासन समितिमा उजुरी दिएपछि अर्याल राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चाको पात्र भएका हुन् । नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाको आन्तरिक राजनीतिदेखि असंतुष्ट रहेपनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लामो इतिहास बोकेको पार्टीको कार्यकर्ता हुनुमा अर्याललाई गर्व छ । यही पार्टीमार्फत लोकतन्त्र स्थापना र पुर्नस्थापनाको लागि संघर्ष गर्दै आएका कांग्रेस नेता एवं महासमिती सदस्य अर्यालसंग अबको परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाली कांगे्रसको भुमिका र समसामयिक गतिविधिका बारेमा नेपालबहस डटकमका लागि पत्रकार श्रीकृष्ण सिग्देलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
भोजराज जी ! आजकल के गदै हुनुहुन्छ ?
राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समर्पित एउटा कार्यकर्ताको लागि आफ्नो भौतिक शरीरको स्वास्थ्य भन्दा पार्टीको सफलता असफलता बढी महत्वपुर्ण हुने रहेछ भन्ने महशुस गर्दै आएको छु । नेपाली कांग्रेस अहिले जुन संकटबाट गुज्रिएको छ, त्यसले पिडाबोध गराईरहेको छ । साथीभाईहरुसँग भेटघाट, साथीभाईका समस्या छन् भने तिनको समाधान खोज्नेतर्फ लाग्छु । भगवानको कृपाले शासनसत्तामा बस्नेहरुले त्यति ठुलो गल्ती गरेनन् भने अब राजनीतिक आन्दोलन समाप्त हुनुपर्छ र आर्थिक क्रान्तितिर सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । मपनि बचेको समय कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छु । सामाजिक परिवेशमा हामीले फेरी एउटा उदाहरण बनेर देखाउन सक्नुपर्छ । अबको मेरो कदम त्यसै दिशातर्फ केन्द्रित छ ।
केन्द्रिय नेताका बिरुद्ध अनुशासन समितिमा कडा कारवाहीको माग राखी उजुरी दर्ता गरेपछि यतिबेला तपाई चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ । तर तपाईलाई उल्टै कांग्रेसभित्रै गुट—उपगुटको राजनीति गरेको अनि आफ्नै पार्टीका उमेदवारलाई संघीय चुनावमा पराजय गराउन भुमिका खेलेको आरोप छ ? यही आरोपका आधारमा तपाईमाथि कारवाहीको सिफारिश पनि भएको सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
मेरो कुनै स्वार्थी गुट छैन । म इस्युको आधारमा समर्थन या विरोध गर्ने प्रवृत्तिको मानिस हुँ । पार्टी विभाजनको समयमा म निसंकोच पार्टी मुलधारमा सक्रिय रहे । बीपी कोइरालाको विचारवाट प्रभावित भएर नेपाली कांग्रेसमा लागेको व्यक्ति हुँ म । उहाँले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई मुलमन्त्र मानेर त्यसकै कार्यान्वयनका लागि लामो समय संघर्ष अनि संगठनमा लागियो । समाजवाद ल्याउन क्रियाशिल रहियो ।
०४६ को जनआन्दोलनपछि पार्टी पटक –पटक सत्तामा पुग्यो तब तब पार्टीमा विभिन्न खाले मानिसहरुको प्रवेश हुन थाल्यो । नाङ्गलोमा कंकड बेच्ने व्यापारी देशकै धनाढ्यमा गणना हुन थाले । उनीले नै पार्टीभित्र व्यापारी, भ्रष्टाचारी, ठेकेदार , दलाल, वाहुबली आदिलाई पार्टीको उपल्लो तहसम्म पु¥याए । अहिले पार्टीलाई त्यही समुहले नै कब्जा गरेर चलाएको छ । म यस्ता प्रवृतिप्रति अलि सकारात्मक हुन नसक्दा त्यस्ता तत्वको दृिष्टको तारो बनिदो रहेछ । निष्ठा र इमान्दारितालाई जीवनको मुल सम्पती मानेर हिड्दा पक्कै त्यसका पक्षघरहरु मेरो पक्षमा होलान् । ती गुटगत राजनीतिका लागि तयार पारेका जत्था हुन सक्दैनन् ।
जहाँसम्म निर्वाचनमा सहयोग नगरेको आरोप छ , मलाई गोपालमान जीले उहाँकै घरमा बोलाएर टिकट लिनेभए पैसाको जोहो गर्न भन्नुभयो । करिब ५० वर्ष काम गरेको पार्टीमा टिकट किन्नुपर्ने अवस्था आएको देख्दा मलाई खिन्नता लाग्यो । पैसाले टिकट किनेर लिनुपर्छ भने लिन्न, पैसा नदिईकन टिकट लिने हो भने म जनताको घरआँगनमा जान तयार छु भनेर गोपालमानजीलाई भने । पैसा नै नहुने भएपछि सल्लाह गरौंला भन्ने कुरा भयो । पछि टिकट मलाई नदिएर उनका हनुमानलाई टिकट दिईएछ । यसबाट मोटो रकम असुलेर टिकट बिक्री भयो भन्ने कुरा स्वतः बुझियो । पार्टीमा अन्य सिनियर साथीहरु पनि थिए, त्यसको पनि वास्ता गरिएन । वैचारिक हिसाबले बनेका विचार समुहलाई समेटिएन । पार्टी विभाजनको बेला प्रजातान्त्रिक पक्षधरमा लाग्नेहरुलाई मात्र सबै तहमा टिकट दिइयो साथै जनताको बीचमा राम्रो छवि नबनाएका व्यक्तिहरुलाई टिकट दिएका कारण निर्वाचनमा देशभरी कांग्रेसको अवस्था अत्यन्त कमजोर र लज्जाजनक पराजय व्यहोर्न प¥यो ।
चुनावमा जिल्ला, क्षेत्र, नगर र गाँउतहको नेतृत्वमा बसेका साथीहरुको भुमिका राम्रो देखिएन । एकखाले कांग्रेसलाई पुरै पाखा लगाएर चुनावी मैदानमा गोपालमान जी उम्मेदवार बनेर लाग्नु भो । निर्वाचनमा शर्मनाक पराजय भोगेपछि हामीलाई असहयोग गरेको आरोप लगाइएको हो । गोपालमान जीले नै पार्टी सभापति बनाउन भुमिका खेलेका तत्कालिन स्वर्गीय कमल पंगेनीलाई हराउन गोपालमान जी आफै लागेको पंगेनी जीले मलाई भेटमा सबिस्तार गर्नुभएको थियो । पंगेनी हराउन आफ्ना अत्यन्त नजिकका मानिसद्धारा साम–दाम प्रयोग गरेर निर्वाचन जित्ने सुनिश्चित भएको स्याङजा १ को प्रदेश (क) का उम्मेदवार पंगेनीलाई हराएको व्यहोरा मृत्युपुर्व पटकपटक मसगँ उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो । नेताले तल्लो स्तरको गुटबन्दी र प्रलोभनमा परि टिकट वितरण गरेका कारण स्याङजामा कांग्रेसको पराजय भएको व्यहोरा जगजाहेर छ ।
लगभग आधा शताब्दी जेल, नेल , यातना र संघर्ष गरेको मैले आफ्नो पार्र्टीको जिम्मेवार तहमा बसेको मानिसबाट टिकट लिन पैसा दिनुपर्ने अवस्था आएपछि त्यस्ता मानिसको पछाडि लागेर फेरि यी मानिस चरित्रवान हुन भनेर जनतामाझ जान लाज लागेर निष्क्रिय बसेको चाहि सत्य हो । मेरो पनि रगत र पसिनाले बनेको पार्टीलाई असहयोग गर्ने कुरै आउदैन ।
जनताले तिरस्कार गरेपछि लाज पचाउन हामीलाई कारवाहीको नाटक गरेको हो । कार्वाही नै गर्ने हो भने टिकट बेच्नेलाई गरिनुपर्छ , सँगै चुनाव लडेको साथीलाई हराउन गुट परिचालन गर्नेलाई कार्यवाही हुनुपर्छ । पार्टीले कारवाहीको सिफारिस गरेको भन्ने सुनेको हो । वडातह, नगर, क्षेत्र र जिल्लातहमा समिक्षा र छलफलपछि सिफारिस गरेको भए राम्रो हुने थियो । पराजय भोगेका उम्मेदवारहरुको निवेदनका आधारमा सिफारिस गरिएको हो भन्ने थाहा पाएको छु । भोजराज अर्यालले कसैलाई भोट नहाल भनेको प्रमाण पेश गर्नपनि अनुरोध गर्दछु ।
अझ देशभरी कांग्रेसलाई पराजित दिलाउने, सिमित गुटको आधारमा पार्टी कब्जा गर्ने, कांग्रेसमा सैद्धान्तिक विचलन ल्याउने नेतृत्व र तिनका गुटलाई कार्यवाही गरी इमान्दार र स्वच्छ छवि भएका नयाँ पुस्तालाई पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गरिएन भने कांग्रेस पार्टीलाई इतिहासको गर्तमा खोज्नु पर्ने निश्चित छ ।
नेपाली कांग्रेसमा निष्ठाको राजनीति अन्त्य भएको हो ? महामानव बीपी कोइरालाले प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछि सुकिला—मुकिला हावी हुनेछन भन्नुभएको थियो, तिनै सुकिलामुकिला हावी भएर कांग्रेसले पराजय व्यहोर्नु परेको हो कि ?
नेपाली कांग्रेस अहिले बडा विचित्रको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । गुटगत राजनीति गाँउ तहदेखि केन्द्रिय तहसम्म चरम उत्सर्गमा पुगेको छ । पार्टीमा योग्यता, क्षमता ,त्याग, बलिदान र इमान्दारिताको कुनै मतलब छैन । अहिले पार्टी व्यापारीकरण, ठेकेदारीकरण भष्ट्रिकरण, दलालीकरणमा बदलिएको छ, । साच्चै भन्दा इमान्दारिता ,निष्ठा, मुल्यमान्यताको राजनीति अहिले मुर्छित अवस्थामा छ ।
बीपी कोइरालाले भनेजस्तै पार्टीभित्र सुकिला–मुकिलाको रुपमा भष्ट्राचार गरेर अकुत सम्पति कमाएका, राजनीतिकोे आडमा ठेक्कापट्टा हत्याएर अकुत सम्पति कमाएका, जग्गा दलाली गरेका वा कुनै न कुनै रुपमा २ नंम्बरी धन्दामा लाग्नेहरुकैे हालीमुहाली राजनीतिको अग्रभागमा देखिएको छ । पैसा भए टिकट घरमै छोड्न आउँछन् अहिलेका नेताहरु । यस्ता यावत कर्महरुको प्रयोगको थलो हरेक पार्टीहरु बनेका छन् । नेपाली कांग्रेस पनि यसैको शिकार भएको छ । जहाँ निष्ठा,मुल्यमान्यता र आर्दशको राजनीति गर्ने पुराना कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाइएको छ । त्यसैले पार्टीमा त्यस्तो प्रवृत्तिकाविरुद्ध नयाँ–पुराना सबै निष्ठावान कार्यकर्ताहरु मैदानमा उत्रन ढिलो भईसकेको छ ।
तीन—तीन कार्यकाल स्याङ्जाको पार्टी सभापति पद सम्हाल्नु भएका कांग्रेस सभापति कमल पंगेनीको अकल्पनीय मृत्यू पश्चात यतिबेला स्याङ्जा कांग्रेस का.वा. सभापतिको भरमा चलेको छ, अबको निकास के हुन्छ होला ?
बडो दुखद घटना व्यहोर्नु प¥यो स्याङजा कांग्रेसले । चतुर राजनीतिक खेलाडीको रुपमा उदाउदै गरेका पार्टी सभापतिको आकस्मिक निधनले स्याङ्जामा एउटा राजनीति रिक्तता उत्पन्न भएको छ । ७/८ महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रले विधान बमोजिम पदपुर्तिको अनुमति नदिएर एउटा तदर्थवादी प्रक्रिया त्योपनि एउटा गुटको झुण्डले सचिवलाई का.वा. सभापति भईस भनेर आत्मरतिमा रमाई रहेको संगठन तहसनहस छ । त्यसको कसैलाई मतलव छैन । उनीहरु नै पार्टी कब्जा गर्ने दिवास्वप्ना देखिरहेका छन् । विधानले व्यवस्था गरे अनुसार रिक्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन प्रक्रियाद्धारा पदपुर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार गर्नु बाहेक अन्य विकल्प हुनै सक्दैन ।
सक्रिय राजनीतिमा कति बर्ष बिताउनु भयो ? अबको राजनीतिक उपस्थिती कुन पदमा वा कसरी हुन्छ होला ?
१३ –१४ वर्षको सानो उमेरदेिख नेपाली कांग्रेसमा लागेर २६–२७ सालतिर स्याङ्जामा ने.वि संघको गठन गर्ने काम गरियो । प्रथम अधिवेशनबाट केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि स्याङजाको प्रतिनिधित्व गरेको थिए । निधीलाई ने.वि संघको सभापति बीपीको निर्देशनमा हामीले बनाएको हो । जबकी उनको विद्यार्थी राजनीतिमा खासै राम्रो प्रभाव र लगानी थिएन ।
२०३१ सालमा पार्टीको क्रियाशिल सदस्य बनेपछि स्थानिय कमिटी प्रमुख, क्षेत्रीय सचिव, जिल्ला सचिव दुईपटक र आठौं महाधिवेशनदेखि लगातार ६ पटक पार्टीको केन्द्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुदै आएको छु । यसरी हेर्दा कांग्रेसमा ४६–४७ वर्ष सक्रिय रुपमा जेलनेल र यातना सहदै बिताए । ०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनमा राज्यले मेरो टाउकाको मुल्य पनि तोक्यो । जीवित वा मरेको ल्याउनेलाई ५० हजार इनाम दिने भनेर । यी र यस्ता धेरै कालखण्ड पारगर्दै पार्टीलाई परिवार भन्दा बढी महत्व दिएर लागियोे ।
अबको मेरो उपस्थिति भनेको पार्टीलाई यसका उत्पादन केन्द्र (ग्रासरुट) देखि शुद्धीकरण गर्दै कांग्रेसलाई पुरानै बिरासतमा लैजानुपर्छ भन्ने हो । अहिलेकै तरिकाले कांग्रेस पार्टीलाई अगाडि बढाउन खोजियो भने अझ बढी कठिनाईहरु आउन सक्छन् । अहिले कांग्रेसका हरेक पार्टपुर्जाहरुमा खिया लागेको छ । यत्रो गौरवपुर्ण इतिहास भएको मुलुकको जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टीप्रति अहिले पनि जनताले आशापुर्ण नजरले हेरिरहेका छन् ।
समयमै यो संकेत बुझ्न सकिएन र अबपनि यिनै बासी र खिया लागेको असक्षम नेतृत्व रहिरह्यो भने न मेरो उपस्थिति होला न कांग्रेसकै अवसर आउला । त्यसैले गुटगत राजनीतिको अन्त्य गरेर कांग्रेस समयमै सच्चिनुको विकल्प छैन ।
कांग्रेसका नेताहरु आफ्ना कार्यकर्ताहरु प्रति इमान्दार हुन छाडे भन्ने गुनासो बारे तपाईको प्रतिक्रिया ?
युद्धको मैदानमा सिपाहीको भन्दा कमाण्डरको कौशलता बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । समयको गतिलाई बुझेर ठिकठिक रणनीतिहरु अख्तियार गर्न नसके हारको विकल्प हुदैन् । त्यस्तै हाम्रो दलरुपी फौजको कमाण्डर विवेकशील,निस्वार्थी र जनभावना बुझ्ने खालको हुनुपर्छ । अहिले जस्तो दुषित ,पुर्वाग्राही , लोभीपापी व्यक्तिहरुको घेरामा पार्टी नेतृत्व रहेसम्म कार्यकर्ताप्रति इमान्दार हुने कुरै भएन । तर त्यसो भनेर हातखुट्टा गलाएर बस्यौ भने कहिल्यै न्याय पाईदैन । त्यसैले बीपी कोइरालाले भने जस्तै त्यस्ता दुषित तत्वलाई परास्त गर्न कार्यकर्ता तयार भए भने तिनीहरु कि बदलिन्छ कि पाखा लाग्छन् ।
तपाई कस्तो नेता !नरम वा कडा ?
धेरै कुरामा आफ्नो मुल्याङकन आफैले गर्ने कुरै भएन । साथीभाई र तपाईहरुले नै मुल्याङ्कन गर्ने हो । एउटा कुरा चाही मलाई झुटमुट र अन्याय सहन गर्न गाह्रो पर्छ । त्यसैले मेरो मुल्याङ्कनको जिम्मेवारी यहाँहरुलाई नै दिन चाहन्छु ।
राजनीतिमा लागेर तपाईले केही गुमाउनु पनि भयो कि ?
मेरो परिवारमा मेरा दाजुभाईहरु उच्चस्तरको जीवन जिउँछन् । म पनि व्यक्तिगत आवश्यकता परिपुर्तिमा लागेको भए सुविधासम्पन्न जीवन जिउथे होला । तर मलाई त्यसमा कुनै पश्चताप छैन किनभने मैले पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दुई थोपा रगत दान गर्न पाएको महशुस गर्छु । गुमेको चीजको कुनै पश्चताप छैन ।
तपाई वालिङ गाविसको अध्यक्ष एंव पछि मेयर हुँदा तपाईको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण र अन्य सफलताहरु के के हुन् ?
२०४६ सालको परिवर्तनपछि हामीमा दोहोरो जिम्मेवारी आएको थियो । एउटा पार्टीको संगठनलाई जनस्तरसम्म पु¥याउने अर्को विकाश निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने । २०४६ वैशाखमा गठन भएको आदरणीय संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको अन्तरिम सरकार अत्यन्त छोटो र जटिलताका बीचमा पनि तोकेकै समयमा संविधान निर्माण गरेपछि राजनीतिक पार्टीहरुमा एक प्रकारको उत्साह प्रदान गरेको थियो । २०४८ साल वैशाखमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि नेपाली कांंग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो ।
२०४९ मा नयाँ संरचनामा स्थानिय निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा वालिङ गा.वि.स अध्यक्षमा निर्वाचित भईसकेपछि सिमित साधन स्रोतका वाबजुद अथक प्रयास गरी वालिङलाई नमुना गा.वि.स बनाउन सफल भएको जस्तो लाग्छ । सन्तुलित ढंगबाट विकास निर्माणका कार्यहरु, स्कुल नभएका वार्डहरुमा स्कुल खोल्नेदेखि नदीनालाहरुमा पुल सिंचाइका लागि कुलो, खानेपानी बाटोघाटो ,पिछडिएका वर्गको संरक्षण तथा उत्थानका कार्यक्रमहरु संचालन गरिए र यस वालिङ गा.वि.सलाई नगरपालिका बनाउने जस्ता प्रमुख कार्यहरु त्यस समयमा गरे ।
२०५४ सालमा भएको स्थानिय निकायको निर्वाचनमा मलाई वालिङ नगरपालिकाको नगर प्रमुख बन्ने अवसर प्राप्त भयो । त्यस बखत सिमित साधन श्रोतबाट हामीले निम्न कार्यहरु गरेका थियौं ।
क) पहिलो वर्ष खानेपानीलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर कार्य ग¥यौं ।
ख) तीनवटा गा.वि.स मिलेर बनेको न.पा का ११ वटै वडामा मोटर बाटो पु¥यायौं । यसै क्रममा खुलेका ग्रामिण सडकहरु मिर्दी–भिमाद, त्रियासी–रत्ने–सिमलचौतारी–माँझकोट– ढावखोला–वोगटीडाँडादेखि चिथाभञ्याङ ,सुर्कौदी ,पेखु देउराली आदि अहिलेपनि धेरै महत्व राख्ने बाटोहरु खन्याैं।
ग) नदीनालामा पुल पुलेसाहरु निर्माण
घ) गरिब जेहन्दार विद्यार्थीलाई बिद्यालय जान प्रेरित गर्दै किताबकापी स्कुल ड्रेस
ङ ) दलित छात्रछात्रालाई पढ्न प्रेरित गर्ने कार्य
च) वालिङ बजार साँघुरो चोकलाई जैसी पंधेरादेखि केदारनाथ मन्दिरसम्म सडक बिस्तार गरे
छ) खरीबोट–भिमटारी–ढावखोला हुदै डुम्रिकोटसम्म रिङरोड निर्माण, त्यसै स्थानमा पार्टीद्धारा महामानव बीपीको शालिक निर्माण गरि बीपी चोक नामाकरण गरे
ज) न.पा कार्यालय भएको भवन भएको जग्गा खरिद जुन अहिले न.पाको प्रगति देखिने माध्यम बनेको छ । भवन पनि त्यतिबेलै निर्माण गर्ने योजनालाई नेपालमा भएको हिंसात्मक द्धन्दले प्रभावित पा¥यो । एक घर पनि नछोडी ११ वटै वार्डमा विद्युतिकरण जुन अहिलेजस्तो सजिलो थिएन ।
झ) विद्यालयहरुलाई सवलिकरण गर्दै नभएको वार्डमा विद्यालय खोल्ने कार्य
ञ) कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न त्रियासीमा संकलन केन्द्र स्थापना किसानलाई मल, बिउ, बाख्रा ,बंगुर वितरण ।
ट) स्रस्टाहरुको र्वािर्षक रुपमा सम्मान गरियोे ।
ठ) सिंचाई , नदी नियन्त्रण, खेलमैदान निर्माणको अवधारणा त्यसै बेला सुरु गरे ।
ड) युवाहरुलाई खेल सामग्री वितरण जस्ता कार्यहरु समावेशी र सन्तुलित ढंगबाट गरिएको थियो । माथि उल्लेख गरिए लगाएत अन्य कार्यहरु पाँच वर्षमा जम्मा पौने चार करोडको बजेटले सम्मान गरिएको थियो ।
अन्त्यमा आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
वालिङ लगायत जिल्लाको समग्र विकासका लागि सबै नागरिकले चनाखो साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्छु । म एउटा राजनीतिक प्राणी भएको नाताले जिल्लाको कांग्रेसलाई बलियो बनाउन पुराना नेताको सम्मान गर्दै खोजी गर्ने परिपाटी बसाल्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । राम्रालाई भन्दा आफ्नालाई मात्रै खोज्ने विकासको अन्त्य गरौं । यसैमा सबैको भलो हुनेछ ।
#nepali congress syangja